people Nepal » तपाईको मत बदर होला है ! तपाईको मत बदर होला है ! – people Nepal
तपाईको मत बदर होला है !
२१ चैत, काठमाडौं । स्थानीय तहको विकासका लागि आफैँले आफ्नो प्रतिनिधी छान्ने स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब ४१ दिनमात्र बाँकी छ । तर, निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म मतदाता शिक्षा अभियान चलाएको छैन ।
दलहरुवीच राजनीतिक असमझदारी बढेको र निर्वाचन तालिकामा समेत प्रभावित भएको छ । यसको असर मतदाता शिक्षामा समेत पर्न सक्छ । यदि मतदाता शिक्षा अभियान प्रभावकारी नहुँदा मतदान गर्ने स्थिति आयो भने कसरी मतदान गर्ने रु कस्तो अवस्थामा तपाइले गरेको मतदान बदर हुन्छ वा नगन्य हुन्छ रु